एउटा सेकेन्ड हेन्ड सुटकेसले चम्कायो ५० वर्षीय हाबर्डको भाग्य ! सबै तीनछक – Dainik Sangalo
एउटा सेकेन्ड हेन्ड सुटकेसले चम्कायो ५० वर्षीय हाबर्डको भाग्य ! सबै तीनछक
September 14, 2020 557
एजेन्सी। आजको समयमा मानिसहरु केहि पैसाका लागि मानिसहरुकै ज्या’न लि’न पनि पछि पर्दैनन् । अमेरिकाको सेन्ट्रल मिसिगन शहरमा बस्ने ५० वर्षीय एक व्यक्तिले सपिङ महलबाट सेकेन्ड हेन्ड सुटकेश किनेका थिए । तर त्यहि पुरानो सुटकेसले नै उनको भाग्य चम्काइदियो । घरमा आएर उनकी छोरीले उक्त सुटकेस खोलिन् तब उनीहरु सबै चकित भए । उनीहरुले किनेको सेकेन्ड हेन्ड ब्यागमा ४८ लाख रुपैयाँ फे’ला पर्याे ।
हाबर्ड किर्बी नाम गरेका उक्त मानिसले पहिले यो पैसाले आफ्नो घरको क’र्जा चुकाउँने बारेमा सोचे । तर उनले इमान्दार हुनुपर्छ भन्दै आफ्ना वकिललाई यो बारेमा जानकारी गराए ।वकिलले उनलाई कसैले पनि का’नूनी रुपमा का’रवा’ही गर्न नसक्ने बताए । तर पनि हाबर्डले मानेनन् र पैसा धनीलाई बुझाउने निर्णय गरे ।
उनले पैसाले भरिएको उक्त सुटकेस सपिङ महलका म्यानेजरलाई फिर्ता गरे । सुटकेसको बारेमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो सुटकेस न्युबेरी परिवारको भएको प’त्ता लाग्यो ।
न्युबेरी परिवारले आफ्नो पिताको मृ’त्यु’ पश्चाद् त्यो सुटकेस नहेरिकन सेकेन्ड हेन्ड सामान बेच्ने सपिङ महल सेन्टरलाई दिएका थिए । पछि हाबर्डको इमान्दारिता देखेर न्युबेरी परिवारले हाबर्डलाई नै सोहि पैसाले सम्मान गर्याे ।
Prevप्रचण्डबाट धो का भयो भन्दै नेकपामा फेरि भाँ ड भै लो
Nextराष्ट्रिय झण्डा ज’लाएका गेल्जङ दोर्जे तामाङ पुर्पक्षका लागि जे’ल चलान
विश्वको खतरनाक बाटो
महिलाको टाउको एकातिर शरीर अर्को तिर परेको अबस्थामा शव फेला, मोबाइल, ब्याग, चप्पल समेत फेला
कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यार्थीहरुलाई खुसीको खबर, तुरुन्तै पढ्नुहोस् !
आज पनि घट्यो सुनको मुल्य
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (127504)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (75241)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (70033)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (55939)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50615)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (44330)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (42586)
यिनै हुन् कक्षा १२ को परीक्षामा सबैभन्दा बढी अंक ल्याएर ‘नेपाल टप’ गर्ने सुम्निमा श्रेष्ठ
तपाईंको जस्तै सोच सबैको भयो भने जातीय विभेदको अन्त्य हैन, जातीय लडाइँ सुरु हुन्छ रुपाजी !
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि ट्याक्सी पनि चल्न पाउने
रबिलामीछाने फाउण्डेसन द्वारा मनाङ बाढी पिडितको लागि हेलिकप्टरबाट सामाग्री लगियो
भोलि देखि सार्वजनिक यातायात खुल्ने